Markay haweeneydu ku fiiriso - Talooyin ku Saabsan Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 19/08/2021 14:07 | Lamaanaha iyo Galmada
Xiriirka indhaha waa qaab isgaarsiineed oo ka dhexeeya dadka, iyo waxaa laga yaabaa inay tahay tilmaan soo jiidasho leh. Markay haweeneydu ku fiiriso, waxaad ogaataa inay jirto wax kale, inkastoo aadan weli ogeyn inay tahay iyo in kale cagajuglayn, bogaadin ama yaab.
Xaalado badan waa inaan dhaqaajino dareenkeena lixaad hadana waa inaan dhaqaajinaa fekerkeena togan si aan u hubin karno in aragtidaas go'an micnaheedu wuxuu noqon karaa xukun ama hanjabaad. Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay indhahayaga oo ah hub weyn oo awood si dadka oo dhan u wada xiriiraan adigoon isticmaalin luuqad afka ah, ayaa ah qodobka koowaad ee xaaladaha dhow.
1 Markuu qof ku dhaygago
2 Eeg sida uu u dhaqmo isagoo indhaha ku haya
3 Maxaa dhacaya markaad ka fogaato araggiisa?
Markuu qof ku dhaygago
Xaqiiqdii waad dareentay sida qof kuu eegayo adiga oo aan indhahaaga ku arag. Daraasad lagu daabacay joornaalka Bayolojiga hadda xaqiijiyay in dadka oo dhami ay diyaar u yihiin inay saadaaliyaan marka qof na eegayo iyada oo aan si dhab ah u fiirinayn.
Si aan ku talagal ahayn iyo iyadoo lagu sawirayo indhaha qaawan, waxaan sidoo kale fiirin karnaa marka qof jidhkiisa dhinac noo soo jeediyo oo xitaa madaxiisa u jeediyo dhinac isku mid ah. Xaaladdan oo kale waxaan dareemeynaa marka qof ayaa indhihiisa nagu haya.
Maxaa dhacaya markaan dareemo in haweenay na soo eegayso? Shaki la’aan gadaal baan eegnaa oo dhaqdhaqaaqani wuxuu sababi karaa in qofka kale uu sii fiirsado. Eeg sida wejigeedu yahay iyo inta ay indhaheedu sii socdaan. Haddii dhowr ilbidhiqsi ay indhaha ku eegto oo wejigeedu yahay mid dhab ah oo qarsoodi ah, shaki la’aan in gabadhu adiga kugu faraxsan tahay oo ay hubaal tahay in la majeerto. Laakiin ha khaldamin, waxaa jira haween aad u dahsoon oo hubaal ah inay ilaalinayaan qarsoodigooda waxayna isku dayayaan inay ku qiimeeyaan ka hor intaadan samayn jeeg.
Dantu waa qayb ka mid ah fiirinta taxaddar leh, laakiin mar walba ma noqon karto soo jiidasho galmo. Dadku si dhow bay u eegi karaan sababtoo ah waxay dareemayaan bogaadin iyo xiise. Taasi annaga oo dareemaya in la arkay waxay u ekaan kartaa murugo iyo weerar. Faahfaahinta indho -indhayntu waxay noqon kartaa mid adag, sida ay samaynayaan akhris joogto ah nafteena. Waxa ugu dabiiciga ah ayaa ah inaad ka guurto meeshaas haddii aadan ku qanacsanayn ama aad u dulqaadanayso daqiiqaddaas adigoon siinayn muhiimad dheeraad ah.
Eeg sida uu u dhaqmo isagoo indhaha ku haya
Dumarku ma eegaan qof, sidaas oo kale, waa tilmaam taas dan weyn baa jirta. U fiirso faahfaahinta dabeecadooda, waxaa jira tafaasiil aan la ogaan karin sida dhiirigelin iyo fiiro gaar ah leh. Haddii gabadhaasi kuu timaaddo oo wuxuu u dhaqmaa xishood iyo xishood, xaqiiqdii dan baa jirta. Haa wuxuu xiiseynayaa xaaladdaada shucuureed, waa dareen indhihiisana kaaama qaado, waa tafaasiil fudud oo tilmaamaysa inuu ku jecel yahay.
Haddii aad ku jirto wada sheekeysi kooxeed waxaa sidoo kale jira calaamado xiiso weyn leh. Xitaa haddii aad saaxiibbo la joogto, hubaal wuu ku eegi doonaa shukaansiga, taataabanaya timaheeda si joogto ah oo isku dayo inuu sawiro haddii aad dib u eegto.
Hubaal danahaas dhexdiisa wuxuu raadinayaa xiriir jidheed, wuxuu muujinayaa wejiyo kalgacal leh wuxuuna rabaa inuu ku dhoola cadeeyo. Kaliya maahan inuu ku tuso soo jiidashadiisa faahfaahintaan, laakiin sidoo kale wuxuu ku siinayaa bogaadin. Laakiin haddii ay gabadhu wax yar ka xishooto, waxaa laga yaabaa inaysan muujin calaamadahan waana inaad fiirisaa kuwa kale.
Haweeneydaasi waxay ku haysaa fiirintaada xaggeeda, laakiin haddii aad leedahay iyada oo dhow fiiri bushimahaaga si joogto ah Waa tilmaan taas wuxuu sugayaa inuu ku dhunkado. Afkaagu wuxuu u muuqdaa mid dareen u haya isaga oo aan is ogayn ayuu malaynayaa sida dhunkashadaadu noqon karto.
Haddii daqiiqaddu aad uga dhowdahay oo aad seexato, fiirso markaad galmo samaynayso Hadduu ku dhaygago adigoon fiirin Waa calaamad aad u cad inay jacayl ku jirto. Marka haweeneydu ay indhaheeda ku dhegto waqti dheer, waxay yihiin calaamado cad dad aad ugu kalsoonXitaa waxay leeyihiin dabeecad daacadnimo.
Maxaa dhacaya markaad ka fogaato araggiisa?
Waxaan si faahfaahsan u sheegnay in qofku marka uu si taxaddar leh u fiiriyo oo uu fiirinayo qabashadiisa ay tilmaam u tahay inuu yahay qof aad u hubaal naftiisa iyo dan weyn oo xaggaaga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dad aad u ammaan daran oo sameeya caksigeeda. Kuma caawin karaan inay si joogto ah kuugu fiiriyaan, laakiin ma sii hayn karaan araggooda intaas dheer markay kula kulmaan kuwaaga.
Ma aha astaan ​​aan danaynayn, ee waa halkii soo jiitaan oo dareemaanNabadgelyo -darradaas iyo cabsidaas, oo aan tafaasiil ka bixinay, ayaa ah falcelinta dadka noocan ah. Haweeneyda iska ilaalinaysa fiirinta waa sababta sidoo kale wuxuu qariyaa wax shaqsiyeed waxaana laga yaabaa inaad ogaato.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la tixgeliyaa in haweeney ilaalineysa fiiro joogto ah waa astaanta xiisaha, kana fog noqosho qof aqoon leh oo la aqbalay. Laakiin dhinaca kale waxaan ka heli karnaa haween dhibban walaaca taabashada indhaha Sidan oo kale, xishoodkooda ayaa iska siiya waxayna ka fogaan doonaan muuqaalkaas haddii ay dhacdo in la xukumo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Markay haweeney kugu fiiriso